4 Week Lover - Na Na Na Na Naa - Bul Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
4 Izu hụrụ nkezi 4.4 / 5 si 33
NA / A, o nwere ihe nlere 59.7K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, fantasy, Manhwa, romance, Yaoi
“… Changed agbanweghị. Mmetụta nke egbugbere ọnụ gị way yourzọ aka gị si achịkọta, dị ka a ga-asị na ị na-ekpe ekpere mgbe ike gwụ gị…. na-ele anya dị ka onye nzuzu. ” Anya pụrụ iche, n’elu ngalaba- Jeong Do-joon, onye banyere na Ngalaba Azụmaahịa na 2018, chere na ndụ kọleji ya ga-akwụsi ike… Mana n’oge na-adịghị anya ha mechara zute Song Jae-hee ọzọ na Mahadum Dormitory ha. Mgbe m nọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, enwere m ihe m na-achọpụtabeghị ...'tnweghị ike ịhapụ m naanị m?! Abụ chịrị Jeong ọchị, onye chọrọ ịgba ọsọ, "Emechaala m." Abụ, onye gbajiri ogwe aka n'ihi Jeong, na-enye nkwekọrịta kama ịhazi ya… "Ruo izu anọ, ị ga-abụ onye m hụrụ n'anya?"
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ mangagogo
Fox Mmụọ mmakọ